I-Fundamentalism eyadala ukuvuleka? URabi uMichael Avraham
I-Fundamentalism eyadala ukuvuleka?
Izimpendulo > Isigaba: Ifilosofi > I-Fundamentalism eyadala ukuvuleka?
Josephon Ubuzwe eminyakeni engu-4 edlule
Angazi ukuthi urabi uzwile yini ngobekwenzeka eminyakeni yamuva nje emphakathini ongekho emthethweni we-Ba'alei Teshuvah ngakho-ke ngizocacisa eminyakeni uma iningi lama-Ba'alei Teshuvah ngendlela yokulahla impilo ye-ultra-Orthodox futhi abaguquki abasha abangeni ngisho nakancane kulo (mina ngokwami ​​ngiyindodana kaTeshuvah eyadelela i-ultra-Orthodox) Namuhla impela i-Orthodoxy ebonakala ingeyesimanje kuzo zonke izici zayo, nokho, uma ubheka umugqa wabo wokucabanga umuntu angabona ubufandamentali obucacile. yenkolelo elula yesintu ebambelela emugqeni olula we-halakhah nokunye okuningi futhi ngiyamangala ngento ethile ephikisana kangangokuthi ama-Fundamentalist adala umphakathi ohlukahlukene novuleleke kangaka, ngingasho ukuthi kungenxa yokungabi nabulili kweqembu le-Ba'ath kanye ukuhlukumezeka okuye kwaba nakho emhlabeni wama-Orthodox.” Nokho, amalungu amaningi e-Baath engihlangane nawo aphila ngokwenkolo ngazo zonke izindlela.
Ingabe urabi angasichaza lesi sigameko?
Omaka bombuzo: ט
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe eminyakeni engu-4 edlule
Incazelo yakho iyathakazelisa, nakuba ngingazi ukuthi imele kangakanani (ingabe ngempela “iningi labaphathi bezimpendulo”).
Kunamaqiniso amabili achazayo lapha: 1. ukuthi aseba yisimanjemanje. 2. ukuthi bagcine incazelo eyisisekelo ye-halakhah nenkolelo.
Angiqiniseki ngezilungiselelo zakho. I-Orthodoxy yesimanje ivame ukuhlotshaniswa nencazelo ye-halakhic eguquguqukayo. Ngokwencazelo, kubonakala kuwumsebenzi kokuthile ukuze uziphilise, noma ukufunda izinkondlo nezincwadi, noma umsebenzi wobuciko. angicacele.
Kungaba nezizathu eziningi zalokhu: ukwazi omunye umhlaba (kukhona enye indlela ngaphambi kwazo). Ukukhathala ngokweqile kwe-fundamentalism (ukusabela esinyathelweni somzali ngakolunye uhlangothi, nokulingisa ukuhlubuka ngakolunye). Kukhona ngempela izizathu ezingokwengqondo (ukuhlukumezeka. Abazange bakhule begxile esikweni lama-Orthodox. Abazali babo nabo bawuhlobo olufunayo).
Ngesikhathi esifanayo abanayo enye imodeli yezenkolo ngoba bayayibona i-secularism noma i-ultra-Orthodoxism. Mhlawumbe yingakho umbono wabo we-halakhah ungowobu-Orthodox.
Zonke lezi zincazelo zingenzeka, kodwa lesi simo sifanele ukuhlolwa okuhlelekile.
uGidiyoni Uphendule eminyakeni engu-4 edlule
Ngokuvamile ukuphindaphinda kwempendulo akwenzeki ngenxa yezizathu zokuhlakanipha, (yebo, ngezwa mayelana "noprofesa" ababeqiniseka "ngamagugu" kanye "nengxoxo") ngakho ukusebenzisa izingqondo zabo kuzobangela ukuphindaphinda kombuzo futhi.
mikyab Abasebenzi	Uphendule eminyakeni engu-4 edlule
Lokhu ukwenzeka jikelele. Cishe zonke izinyathelo zomuntu ziqukethe izindiza eziningana, ezengqondo nefilosofi. Kodwa zombili zikhona emuva empendulweni nasekuphumeni kombuzo.
Joyina abanye ababhalisile abangu-3,092
Ucabangani nge-Oslo Accords?
Izihlalo ezincane VS izihlalo zesikole samabanga aphezulu
Ukuzibulala? Okungenani ngokusho kukaThos.
Juda h Vuliwe Ingabe i-Iran ilapha? Mayelana Nenqubekela-phambili kanye Nenkululeko Ehlanzekile (Ikholomu 483)
Eli K. Vuliwe Impendulo ku-Baal Shem Tov nokubhema, umphefumulo kaRabi Nachman waseBreslav
inyamazane Vuliwe Impendulo ku-Baal Shem Tov nokubhema, umphefumulo kaRabi Nachman waseBreslav
Ungangezi kuyo futhi unganciphisi kuyo Vuliwe Phendula umkhankaso wakwaNida
ukuqedwa Vuliwe Ngokushona kukaProf David Halvani Weiss ongasekho (ikholomu 485)